Myanmar and its bilateral investment treaties
✍️မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ နုိုင်ငံအဆင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာစာချုပ် အခြား ဘယ်နှစ်နိုင်ငံများနဲ့ လက်မှတ်ထိုးထားပါသလဲ?
✍️ဒီလင့်ခ်မှာ https://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/144…ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်။ စာချုပ်တွေကိုလည်း ဖတ်ကြည့်လိုရပါတယ်။
✍️စာမျက်နှာကအချက်အလက်အရဆိုလျင် မြန်မာနုိုင်ငံအနေနဲ့ နှစ်နိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာသဘောတူညီမှုစာချုပ် ၉ ခုလက်မှတ်ထိုးထားပြီး ၇ ခုကတော့ အသက်ဝင်နေပါတယ်။ တရုတ်နုိုင်ငံနဲ့တော့ နှစ်နို်င်ငံစာချုပ်ကို၂၀၀၁ ခုနှစ်ကလက်မှတ်ထိုးပြီး ၂၀၀၂ ကတည်းက အသက်ဝင်ပါပြီ။
✍️မြန်မာနုိုင်ငံက အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နုိုင်ငံလည်းဖြစ်တဲ့အလျောက် အာဆီယံအစုအဖွဲ့အနေနဲ့အခြားနုိုင်ငံများနဲ့နိုင်ငံများကြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကဏ္ဍပါဝင်တဲ့စာချုပ်ပေါင်း ၁၁ခုလည်း လက်မှတ်ထိုးထားပါပြီ။ တရုတ်နုိုင်ငံနဲ့အာဆီယံကြားစာချုပ်ဆိုလျင် ၂၀၀၉ မှာလက်မှတ်ထိုးပြီး ၂၀၁၀ မှာ အသက်စ၀င်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။
✍️ယခုလိုစာချုပ်သက်တမ်းများသည် နှစ်ပေါင်း ၁၀-၂၀ ခန့် ရှိပါတယ်။ ဒါ့အပြင် sunset period ဟုခေါ်သည့် နေ၀င်ချိန်ဟူ၍ စာချုပ်သက်တမ်းကုန်သည့် နောက် ထပ်မံ၍ ၁၀-၁၅ နှစ်ခန့် ထပ်ပေးထားပါတယ်။
✍️ဒီစာချုပ်တွေကို နိုင်ငံတွေက ဘာကြောင့် ချုပ်ဆိုကြပါသလဲ? ဘယ်လိုပြဌာန်းချက်တွေ ပါပါသလဲ?
How many bilateral investment agreements have Myanmar made with other countries?
For starter, you can visit at this link https://investmentpolicyhub.unctad.org/IIA/CountryBits/144… for more info and see the contracts.
Based on the page, Myanmar has signed9bilateral investment treaties and out of them,7are in force. With China, Myanmar has already signed bilateral agreement since 2001 and entered into force in 2002.
As Myanmar isamember of ASEAN, it is also part of the treaties ASEAN made with other countries which contain investment provisions. So far, 11 multilateral agreements have been signed. With China, ASEAN signed “ASEAN-China Investment Agreement” in 2009 and entered into force in 2010.
These kind of treaties last from 10 to 20 years. And on top of that, they are also survived after the termination date for 10-15 more years as sunset period.
Why do countries make such agreements? What kind of provisions are included?